PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-24 - ISETHEMBISO SIKA-TEBZA NGE-CHIPPA UTD
ISETHEMBISO SIKA-TEBZA NGE-CHIPPA UTD
Ilanga langeSonto - 2017-09-24 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UTHEMBISA into yamehlo utebogo “Tebza” Moloi ongumqeqeshi omusha wechippa United ozobhekana nomdlalo wakhe wokuqala ekhaya selokhu eqhoqhobale lesi sigqiki. Ichippa izodudulana nebloemfontein Celtic kowe-absa Premiership namuhla ngesonto ngo-15h00 enelson Mandela Bay Stadium, ebhayi. Ichippa iya kulo mdlalo nje, isinomqeqeshi omusha, umoloi, othathe lo msebenzi kudan “Dance” Malesela okhonjwe indlela.
Umoloi usagijime umdlalo owodwa ekulesi sigqiki ezakhe zibambana nesupersport United ngo-1-1 koweligi ngolwesibili ebusuku elucas Moripe Stadium, e-atterid- geville. Umoloi uzogijima umdlalo wakhe wokuqala ekhaya selokhu ethathe lo msebenzi. Kubhekwe ukuba ajabulise abalandeli kwazise bahambe benxapha le kilabhu igcina ukudlala ekhaya njengoba italajwe yibaroka FC ngo-3-1 kuyo le nkundla emasontweni ambalwa edlule.
Umoloi uthi abathandi bebhola bazobona into yamehlo.
“Siye emdlalweni wesupersport ngisayijimise kabili nje kuphela ikilabhu. Kulokhu ngisitholile impela isikhathi ngalungisa nalapho bekonakele khona. Ngendlela izinto eziyiyona kangisabi nakancane futhi ngiyathembisa ukuthi abantu bazobona into yamehlo kulo mdlalo. Bazobona ichippa ezelwe kabusha,” kusho umoloi.